အထူး သတိ​ပေး​ကြေညာချက်​ - Tameelay
ဒီရက်​ပိုင်းအတွင်း မိန်းကေ​လး​တွေ​ရော ​ယောကျာ်း​လေး​တွေ​ရော ညဘက်​ကိုအတတ်​နိုင်​ဆုံးမထွက်​ပဲ အိမ်​မှာပဲ​နေကြပါ၊
ယခုအခါမှာအထက်​က အထူးစုံစမ်း​ရေးအဖွဲ့နဲ့ မူးယစ်​ကိုနှိမ်​နှင်း​နေကြပါတယ်​၊
ကိုယ်​မသုံးစွဲထားရင်​​တောင်​ အရက်​​အရမ်း​မူး​နေလျှင်​ ပါးစပ်​အနံ့ထွက်​ခိုင်းတာ​တွေ စစ်​​ဆေးခြင်း​တွေခံရမှာဖြစ်​ပြီး အ​ခြေအ​နေဆိုးရင်​ စခန်းကိုခေါ်ပြီး စစ်​​ဆေး​မေးမြန်း​နေပါတယ်​၊
ညဘက်​၁၀နာရီဆို ​နေရာတိုင်းမှာ ရဲ​တွေဖြန့်​ထားပါတယ်​ ​ယောကျာ်း​လေးဆို အကျီချွတ်​ပြရပြီး ​ဆေးလိပ်​ပါရင်​​တောင်​ ​ဆေးလိပ်​အနံ့ ကို​သေချာစစ်​​ဆေး​ပါတယ်​ ၊
ညဘက်​ထွက်တဲ့အခါ ကိုယ်​မသိတဲ့သူ​တွေနဲ့ အတူတူရှိမ​နေဖို့လဲသတိ​ပေးချင်​ပါတယ်​၊ ကိုယ့်​အဖွဲ့ထဲကလူထဲမှာ တစ်​ခုခုရှာ​ဖွေ​တွေ့ရှိသွားသည်​ဖြစ်​​စေ တိုင်​သူရှိ၍ဖြစ်​​စေ ကိုယ်​ပါကြားထဲကပြဿနာထဲကျ​ရောက်​နိုင်ပါတယ်​ ၊
အခုက အစိုးရကိုယ်​တိုင်​က မူးယစ်​ကိုအထူးနှိမ်​နှင်း​နေတာ​ကြောင့်​ ကွင်းဆက်​ထဲမိသွားရင်​ ပြန်​ထွက်​ဖို့နည်းလမ်းမရှိပါဘူး အားလုံးအထူးဂရုပြုကြပါ
Share ခြင်းဖြင့်​ကိုယ့်​သူငယ်​ချင်းမိတ်​​ဆွေ​တွေကို သတိပြု​ပေးပါ၊
Copy Ko Sho Te
ဒီရကျပိုငျးအတှငျး မိနျးကလေးတှရေော ယောကျြားလေးတှရေော ညဘကျကိုအတတျနိုငျဆုံးမထှကျပဲ အိမျမှာပဲနကွေပါ၊
ယခုအခါမှာအထကျက အထူးစုံစမျးရေးအဖှဲ့နဲ့ မူးယဈကိုနှိမျနှငျးနကွေပါတယျ၊
ကိုယျမသုံးစှဲထားရငျတောငျ အရကျအရမျးမူးနလြှေငျ ပါးစပျအနံ့ထှကျခိုငျးတာတှေ စဈဆေးခွငျးတှခေံရမှာဖွဈပွီး အခွအေနဆေိုးရငျ စခနျးကိုချေါပွီး စဈဆေးမေးမွနျးနပေါတယျ၊
ညဘကျ၁၀နာရီဆို နရောတိုငျးမှာ ရဲတှဖွေနျ့ထားပါတယျ ယောကျြားလေးဆို အကြီခြှတျပွရပွီး ဆေးလိပျပါရငျတောငျ ဆေးလိပျအနံ့ ကိုသခြောစဈဆေးပါတယျ ၊
ညဘကျထှကျတဲ့အခါ ကိုယျမသိတဲ့သူတှနေဲ့ အတူတူရှိမနဖေို့လဲသတိပေးခငျြပါတယျ၊ ကိုယျ့အဖှဲ့ထဲကလူထဲမှာ တဈခုခုရှာဖှတှေရှေိ့သှားသညျဖွဈစေ တိုငျသူရှိ၍ဖွဈစေ ကိုယျပါကွားထဲကပွဿနာထဲကရြောကျနိုငျပါတယျ ၊
အခုက အစိုးရကိုယျတိုငျက မူးယဈကိုအထူးနှိမျနှငျးနတောကွောငျ့ ကှငျးဆကျထဲမိသှားရငျ ပွနျထှကျဖို့နညျးလမျးမရှိပါဘူး အားလုံးအထူးဂရုပွုကွပါ
Share ခွငျးဖွငျ့ကိုယျ့သူငယျခငျြးမိတျဆှတှေကေို သတိပွုပေးပါ၊
Facebook Internet line သုံးသည့်ကိစ္စနှင့်ပက်သတ်၍ စကားများရာမှ ဇနီးဖြစ်သူမှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား တူဖြင့် ထုသတ်မှုဖြစ်ပွား
Facebook Internet line သုံးသည့်ကိစ္စနှင့်ပက်သတ်၍ စကားများရာမှ ဇနီးဖြစ်သူမှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား တူဖြင့် ထုသတ်မှုဖြစ်ပွား 29.9.2018 ရက်နေ့ ပဲခူးတိုင်း ပဲခူးမြို့၊ဥသာမြို့သစ်၊ရပ်ကွက်ကြီး (၉)တွင် fb သုံးစွဲခြင်းကြောင့် လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ကိုမျိုးသန့်ဦး(၃၅)နှစ်၊(ဘ)ဦးဘုန်းမြင့်၊မင်းအနော်ရထာစက်ယန္တရားကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ Supervisor၊ဖောင်ရွာ၊ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေသူအား ဇနီးဖြစ်သူ မလှသင်းကြည် (၂၁)နှစ်၊(ဘ)ဦးကျော်မင်းဦး၊အောက်ကမ္ဘာကျေးရွာ၊ပဲခူးမြို့နယ်နေသူသည်ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုမျိုးသန့်ဦးအားအခြားမိန်းကလေးများနှင့်အင်တာနက်လိုင်းသုံးစွဲသည့် ကိစ္စမပြုလုပ်ရန်ပြောဆိုစဉ် …
အမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် မိခင်ထံပြန်လည်အပ်နှံနိုင်ခဲ့တဲ့ သမီးလေး
တော်သေးတာပေါ့ အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကယ်လို့ တော်သေးတာပေါ့ အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကယ်လို့ “လုမ္မနီ”ကားက ပြန်ထွက်ခါနီး ခရီးသည်စစ်သင့်တယ် အောက်တိုဘာလ. (၂၁)ရက် နံနက်(၀၇:၃၀)အချိန် “လုမ္မနီ”ခရီးသည်တင် မှန်လုံယာဉ်သည်သီးကုန်းယာဉ်ရပ်နားကွင်းတွင် ရပ်နားပြီပြန်ထွက်သွားရာ. ၄င်းယာဉ် ခရီးသည် ခုံအမှတ်(၁၆-၁၇)တွင် ရန်ကုန်မှမန္တလေးသို့ လိုက်ပါခဲ့သည့် မဥမ္မာအေးနှင့်သမီးဖြစ်သူယွန်းပန်းအိမ်တို့ နှစ်ဦးအနက် မိခင်ဖြစ်သူမှကျန်ခဲ့ပြီး သမီးဖြစ်သူတစ်ဦးတည်းသာပါသွားကြောင်း ၎င်းယာဉ်အားတားဆီး၍ ကလေးအား. စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းထားပေးရန် …
စိတ်မကောင်းလိုက်တာဗျာ.. တောင်သူဦးကြီးတို့ အထူးသတိထားကြပါနော်…
လယ်ယာသုံး လက်တွန်းလယ်ထွန်စက်ညပ်၍ အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးနေ့စဉ်သတင်း April 2, 2018 မိုးကောင်း ဧပြီ ၂ ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့ ဖိုးချစ်ကုန်းရပ်ကွက်တွင် ဧပြီ၂ရက် နံနက်၁၀နာရီခွဲက လယ်ယာသုံး ရွှေကျွဲလက်တွန်းလယ်ထွန်စက်အား နောက်သို့ဆုတ်ရာမှ ယာဉ်၏လက်ကိုင်နှင့် နေအိမ်ကြမ်းပြင်ကြား လူညှပ်ပါ၍ သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မိုးကောင်းမြို့ ဖိုးချစ်ကုန်းရပ်ကွက်နေ …